जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको नक्सा आफै प्रिन्ट गर्न सक्छन् : शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (भिडियो सहित ) | News Polar
काठमाडौं । सरकारले आजबाट मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने नक्सा, प्लट रजिष्टर, फिल्ड बुकलाई डिजिटल गरी सेवाग्राहीको व्यक्तिगत पहुँचमा दिएको छ । आजबाट जग्गधनीले आफ्नो जग्गाको नक्सा आफै प्रिन्ट गर्न सक्छन् । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाको ८ वटा मालपोत कार्यालयहरुबाट यस कामको सुरुवात भएको छ । यसै सन्दर्भमा न्यूज एजेन्सी नेपालले भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग कुराकानी गरेको छ । ‘मेरो कित्ता’ नाम दिइएको यो डिजिटल प्रणाली के हो ? र कसरी काम हुन्छ भनेर सोधेका छौं ।
व्यक्तिले आफ्नो कुनै परिचय नम्बर अथवा कोड नम्बर पाएर आफ्नो जग्गा जमिनको नक्सा निकाल्न सक्छ । यो त्यही व्यक्ति हो जग्गाधनी पुर्जा अनुसकारको जग्गाको नक्सा हो या उसको स्वामित्व मा भएकै जमिन हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ ?
समय बचत भयो भने अर्थात अहिलेको कर्मचारीको हकमा कुरा गर्नुभएको हो भने म्यानुअललाई प्रविधि मैत्री बनाएर कम्प्युटरमा बसेर काम गरिदिन्छ । अहिले पनि तपाई कुनैपनि नापी कार्यालयमा जानु भयो भने त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ, भित्र कर्मचारीले चलाईराखेको हुन्छ बाहिर मेरो कित्ता कहाँ छ कसैन कसैले हेरिराखेकै हुन्छ । त्यसो गर्दा भिड कम हुने हुन्छ । अहिलेको हाम्रो बेथिति के छ भने सेवाग्राही भन्ने त्यस बाहेक पनि थप अरुपनि हाम्रा सहयोगी साथिहरु पनि भित्र पस्ने भिड हुने खालका कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
# डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे
प्रकाशित : बैशाख ०२, २०७८, १४:३२:५९